Aroosaddii ayaa ku dhex geeriyootay xafladdii arooska waxaana isla goobta lagu badalay gabadh la dhalatay! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Aroosaddii ayaa ku dhex geeriyootay xafladdii arooska waxaana isla goobta lagu badalay...
Aroosaddii ayaa ku dhex geeriyootay xafladdii arooska waxaana isla goobta lagu badalay gabadh la dhalatay!
Gabadha uu guursaday Mangesh kadib markii ay dhimatay caruusaddii
India (Halqaran.com) – Aroos ka dhacayay waddanka Hindiya ayaa yeeshay waji kale kadib markii aroosaddii mar kaliya dhulka ku dhacday iyada oo meyd ah ka gadaal markii uu wadnuhu istaagay xilli xafladda aroosku socotay.
Meydkii aroosadda ayaa goobtii laga qaaday iyadoo qol kale la geeyay waxaana caruuska oo lagu magacaabo Mangesh Kumar isla goobta loogu guuriyey gabadha dhimatay walaasheed.
“Waan garan weynay waxa aan ka sameyn laheyn xaaladda soo korortay labada qoys way fadhiisteen waxa ayna ku heshiiyeen in gabadha dhimatay walaasheed loo guuriyo caruuska,” ayuu yiri Saurabh oo walaal la ah gabadha dhimatay isagoo la hadlayay Local News Channel TV9.
Bishii la soo dhaafay ee May ayay aheyd markii dhacdo kale oo tan lamid ah ay ka dhacday magaalada Maharajpur markaas oo uu meesha ka cararay caruuskii waxaana lagu badalay nin kale oo ay qaraabo yihiin caruuska baxsaday.
Walaasheed lagu badalay